अलिकति समय मिलाएर यो हेर्नुहोस!यी सानातिना गल्तीहरूले पनि यसरी बिग्रन सक्छन् श्रीमतीहरू, समयमै सचेत हुन जरुरी – " कञ्चनजंगा News "
अलिकति समय मिलाएर यो हेर्नुहोस!यी सानातिना गल्तीहरूले पनि यसरी बिग्रन सक्छन् श्रीमतीहरू, समयमै सचेत हुन जरुरी
No Comments on अलिकति समय मिलाएर यो हेर्नुहोस!यी सानातिना गल्तीहरूले पनि यसरी बिग्रन सक्छन् श्रीमतीहरू, समयमै सचेत हुन जरुरी
यस्ता समाचार हरु प्रायः आफ्नै लापरबाही र धेरै बिश्वास दिनुले गर्दा हुने गरेको एक श्रीमति पीडितहरुको भनाइ र उनीहरुको अनुभवले देखाएको छ । आखिर के कारणले हो त ? बिदेशमा गएका पुरुष हरुको प्राय घर बिग्रिनु ? उनीहरुका श्रीमतिहरु गलतबाटो रोज्न ? एउटा तितो एथार्थ हामीले विभिन्न पिडित व्यक्तिका अनुभवहरुलाई मार्फत संकलन गरी प्रस्तुत गरेका छौं । यसको मतलव यो होइन की विदेशमा गएका सबैका श्रीमति नेपालमा बिग्रिएका छन् ।
तर दिनहुँजसो आइरहेका समाचारहरु हेर्दा गलत बाटो अपनाउने श्रीमतिका श्रीमान कि त वैदेशिक रोजगारीमा हुन्छन् या त उनीभन्दा टाढा रहेको पाइन्छ । त्यस्तै आफ्नो श्रीमतिलाई सहीबाटोमा लगाउन बेलैमा सचेत हुनैपर्छ । त्यसका लागि यी उपाय अपानाउँदा राम्रो हुन्छ ।
← एलिस राईले फेरी अर्को निक्कै रोचक फेक ड्राइभ ट्रेनरको भूमिकामा प्र्यांक (पुरा भिडियो हेर्नुहोस्) → तरकारीबाट विषादी घटाउने घरेलु तरिका र विधि यस्तो छ (हेर्नुहोस भिडियो )